Serbia: Etazonia An’i Barack Obama, Zava-baovao Iray Ho An’izao Tontolo Izao? · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 31 Mey 2018 7:19 GMT
Naratra mafy ny fon'ireo Serbia noho ny fanohanan'i Etazonia ny faritanin'i Kosovo Metohia [ang/serba] mikasika ny volavolan-dalàna momba ny fahaleovantena, izay nofidian'izy ireo tamin'ny fiandohan'ny taona. Tsy manam-panantenana mihitsy izy ireo hahita fanovàna ao anatin'ny diplomasia amerikana, izay tarihin'ny filoham-pirenena vaovao Barack Obama [ang]. Na dia tokony mbola haverina hotendrena aza ireo mpiasam-panjakana taloha amin'ny Departemantam-panjakana toa an'i Richard Holbrooke [ang], toa tahàka ny ho afaka hino vanim-potoana firahalahiana [ang] iray vaovao ireo Serba sy izao tontolo izao, ary fiarahamiasa nanomboka tamin'ireo fifidianana filoham-pirenena amerikana vao haingana.
Manambara [amin'ny fiteny serba] i Nemanja Avramović fa mety tsy hisy fanovàna manan-danja mihitsy mikasika ny politika amerikana manoloana an'i Serbia [ang]. Kanefa, mbola manantena zavatra tsara izy:
Mieritreritra [amin'ny fiteny serba] (SRP) i Sivi Soko (”ilay Papango Volondavenona”) fa ny teny filamatra hoe “Fanovàna” an'i Obama dia manakaiky ny an'ilay fampielezankevitry ny filoham-pirenena serba Boris Tadić [ang] “Fiainana Mendrika iray”, ary ho an'ny fampielezankevitra amin'ny fifidianana ihany no misy lanjany.
Nandefa andrana iray [amin'ny fiteny serba] an'i Srđa Trifković [ang] ny gazety mpiseho isanandro iray Glas Javnosti [ang] mikasika ny mety ho fiantraikan'ireo fifidianana amerkàna ao Serbia […]
[…] Kanefa, fantantsika fa ny tariky ny “tetezamita” dia nanendry mpiasan'ny Departemantam-panjakana taloha fony fitantanan'i Bill Clinton. Miasa amin'ny Albright Group ny iray tamin'ireo, orinasa iray an'i Madeleine Albright […] [amin'ny fiteny anglisy avokoa ireo rohy rehetra]
” Ny mety ho hany tokana hanaovana fanovàna lehibe ao anatin'ireo fifandraisana misy eo amin'i Etazonia sy ireo Balkans, dia ny fametrahan'i Serbia amin'ny toerany politika ara-diplomatika iray tena masiatsiaka. Miaraka amin'ny governemantan'i Belgrade ankehitriny, tsy azo lavina, na ahoana na ahoana, fa tsy ho tanteraka izany.”
Ao anaty lahatsoratra iray hafa manampy i Sivi Soko [serba] hoe:
Efa noeritreretinareo fotsiny ve fa ny hafaliam-po izay tsapan'ireo Amerikana sasantsasany amin'i Barack Hussein Obama, dia mitovitovy amin'ilay an'ireo Serba sasantsasany manoloana an'i Slobodan Milošević [ang]? Nampanantena fanovàna ireo lehilahy roa mpanao politika ireo.
Mety ho tsara ny fanendrena an'i Rahm Emanuel [ang] ho eo amin'ny fitarihana ny kabinetra, satria izy dia efa iray tamin'ireo mpikambana tena navitrika indrindra tao amin'ny komity serba ao amin'ny Kaongresy izy. Na izany aza, ny hitoetra ho tena tondro dia ny safidin'i Obama eo amin'ny fitarihana ny Diplomasia. Raha mifidy an'i Richard Holbrooke [ang] izy, tena ho henjana ireo fifandraisana ho avy miaraka amin'i Serbia.
Mivazivazy na tsia i Rivera raha miteny hoe:
[…] Leo an'ireo olana eto amin'ny firenentsika aho […]. Andao tonga dia hanitsy ny dia ho any Havane! Mbola velona foana i Fidel Castro [ang] ary afaka mahita filoham-pirenena amerikana vaovao amin'ny fahavelomany. Sambany, miteny zavatra tsara izy amin'ny lohahevitra mikasika ny iray amin'izy ireo, “lehilahy mahira-tsaina i Obama.”
Heverontsika vetivety anie ho toa inona ny fihaonana misy eo amin'i Fidel sy Raul Castro [ang] sy ny filoham-pirenena amerikana Barack Obama, eny amorontsiraka kiobàna. Hisotro coca-cola-rhum izy ireo miaraka amina gilasy betsaka, ary hanao firariantsoa. Mety hiteny i Barack hoe:
“Ary avy eo lelikeeee, andao adinoina ny lasa. Andao hivadika zavatra hafa!”
A cela, je dis “Hourra!” …………….Hoy aho momba an'io hoe “Oeeee!”